Marijuana Ahụike na Vets PTSD ọka iwu na Peoria, IL | Thomas Howard
Steeti so na steeti iri atọ na atọ na-ekwe ka ojiji a canụ cannabis na ndị nwere ọnọdụ ahụike. A na-eji wii wii ọgwụ na ọgwụ ya ugbu a iji na-agwọ ọtụtụ ọnọdụ, dị ka ọrịa Crohn na glaucoma. E nwere ya n'ụdị dị iche iche, dịka ifuru akpọnwụ, ihe oriri, na obere osisi.
N'afọ 2013, gọvanọ steeti bịanyere aka na Usoro Mmemme Programlọ Ọrụ Ahụike Ahụ Ike Cannabis nke nyere ikike ịkọ, ire na ị ofụ wii wii. N'okpuru iwu Illinois, a na-ahụ naanị wii wii naanị ka ihe iwu kwadoro mgbe onye ọrịa tozuru etozu ma ọ bụ onye na-elekọta zụtara ya site na onye na-ere ere.
Onye ọrịa a ga-enwerịrị ọgwụ wii wii ọgwụ ma ga-eji naanị cannabis gwọọ ọnọdụ dị na kaadi ahụ. N'okpuru mmemme a, enwere ọnọdụ 41 enwere ike ịgwọ ọrịa wii wii dịka ọrịa cancer, HIV / AIDS na Ọrịa Parkinson, n'etiti ndị ọzọ. N’afọ 2016, agbatịkwuru mmemme ahụ ruo n’afọ 2020.
Marijuana Ahụike na PTSD Na Peoria, Illinois.
Enweela ọmụmụ dị iche iche na nsonaazụ nke cannabis ọgwụ na PTSD. Otu nnyocha e mere na Langone Medical Center gosipụtara na cannabis ọgwụ nwere ike inye aka weghachite nguzozi nke anandamide n'ime ndị mmadụ na-arịa PTSD. Anandamide bụ endocannabinoid nkịtị. Akpọrọ ya aha Sanskrit nke pụtara “ọ joyụ” ma ọ bụ “ọissụ,” ihe a na-arụ ọrụ site na-akpali usoro endocannabinoid nke na-achịkwa obi ụtọ, ụjọ na nchekasị.
N'okwu dị mfe, anandamides na-arụ ọrụ dị ka ọgwụ antidepressants eke. Mmepụta a na-ejikọkarị nke endocannabinoid a na-ahụ na a na-achịkwa mmetụta nke ụjọ, nchekasị, iru uju. Anandamides dị ala nwere ike ime ka ọrịa ndị a na-ahụ na ndị na-arịa PTSD,
Sịga Ahụike Ahụike maka PSTD N'okpuru Iwu Illinois
Na 2016, waslọikpe Steeti na Cook County nyere iwu ka ịgbakwunye PTSD na ndepụta nke ọgba aghara kwere ka ọgwụgwọ site na marijuana ọgwụ. Nke a bụ mgbe Gọvanọ Rauner jụrụ ọtụtụ ndị ndụmọdụ nke otu ọkachamara na-ahụ maka ịgụnye PTSD na ọrịa ndị ọzọ na ndepụta nke ọnọdụ cannabis ọgwụ na-agwọ ọrịa n'okpuru mmemme ahụ. Otu izu ka nke ahụ gasịrị, Gọvanọ Rauner bịanyere aka na SB 10 gụnyere PTSD dị ka ọnọdụ ntozu maka iji wii wii ọgwụ. Nke a bụ aka nyere ndị agha lara ezumike nka aka ịlụ ọgụ na PTSD vets, karịchaa maka ndị ọrịa ọgwụ ọdịnala dịka ọgwụ ọgwụ mgbochi mbido na-adịghị mfe ọgwụgwọ.
A na-atụ aro ka Vets na-ata ahụhụ site na PTSD iji nweta nyocha nke ọkachamara maka PTSD dị ka otu n'ime ihe ịchọrọ iji nweta kaadị marijuana ọgwụ. Maka ndị nwere kaadị ndị dị adị, enwere ike ịgbakwunye ọnọdụ ahụ na ndepụta nke ọnọdụ kaadị eji. Enwere ụlọọgwụ dị iche iche na-enyere ndị isi aka itinye akwụkwọ maka marijuana kaadị maka ahụike ha. Vets kwesịrị ịkpachara anya iji zere nsogbu ọ bụla nwere ike ibilite na VA nke na-anaghị amata marijuana dị ka ọgwụgwọ maka PTSD.
Illinois nyere iwu siri ike banyere iwu ọgwụ ike wii wii. Ya mere odi nkpa inweta nkwado na nnabata maka ihe PTSD na cannabis tupu ndi ọrịa vets amalite ịmalite wii wii ogwu maka onodu ha. Ọtụtụ mgbe ndị dọkịta nọ n'ụlọ ọgwụ ndị buru ibu anaghị atụ aro marijuana ọgwụ, nke pụtara na vets kwesịrị ịchọ ndị dọkịta nwere omume ha, ma na-arakarị ọgwụ ọgwụ, ma ọ bụ jụọ ọgwụ na mpaghara gị maka nnyefe.
mgbe Iwu Illinois ka na-emebi iwu ịnwe wii wii, steeti na-enye ohere ịnwe ma jiri ị mariụ wii wii maka ọgwụ ike yana iji ya. Anaghị anabata ndị na-elekọta ahụ maka ịkọ ihe ọkụkụ maka ọgwụ. A na-akụ wii wii niile na Illinois ka ọ nọ n'ime ụlọ n'ọtụtụ ebe ịkụ ọrụ na-agbasa na steeti.